Ndenye Blog: Ọ bụ Oge nkwụghachi ụgwọ Reader! | Martech Zone
Thursday, July 5, 2007 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Ka anyị ghara igbu oge ibe anyị! Achọrọ m iji nyere gị blog ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma NA ị ga-enweta ụfọdụ njikọ ịhụnanya na m blog.
Nkọwa ahụ ga-ebugharị okporo ụzọ ma nyere aka na ogo gị na Technorati na Search Engines. Iji mee nke ahụ, achọrọ m ịbanye na blọgụ gị, yana n'ọnụ ọ!
Otu esi enweta Blog gị:
1. Kwuo m blog na saịtị gị.
2. Dobe m ahịrị na ihe nke post a na njikọ nke post gị.
Nkwa m: Aga m eji nkeji ole na ole tụleghachi nhazi gị, ojiji, SEO, na ederede ọhụrụ gị ịchọta ihe ga - enyere aka tweak weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ gị. Aga m agba mbọ ime ka ngwụcha pụrụ iche na blọọgụ ma ọ bụ weebụsaịtị ọ bụla karịa ịnwa ịchụpụ na ịde blọgụ ọtụtụ.
Ọ bụ ya! Ka anyị rute ntinye ederede!
Enwere onwe gị ịgafe na njikọ a na onye ọ bụla ịchọrọ.
Tags: ntinye ederedeagụ payback
Ndenye Blog-imagination + Innovation
Julaị 5, 2007, elekere 10:56 nke ehihie
Agaghị m ajụ ọmarịcha onyinye a.
Jul 6, 2007 na 6: 12 AM
Anyere gị aka! 🙂
Jul 6, 2007 na 1: 52 AM
Hey Doug, ezigara m njikọ na blọọgụ gị na:
Ị nwere ezigbo blọgụ na m na-amụta ọtụtụ ihe na ya.
Jul 6, 2007 na 9: 47 AM
Ogologo oge ole ka onyinye a dị irè? Enwere m ụfọdụ ọrụ ụlọ ime (mba, agaghị m agbalị ịmepụta ụfọdụ ọrụ ọhụrụ na 'blọgụ' na ya iji kọwaa nchacha m ga-eme na ọdịnaya m :).
Jul 6, 2007 na 11: 24 AM
Mgbe ọ bụla, Pat!
Jul 6, 2007 na 11: 52 AM
Njikere ị nweta ndụmọdụ 🙂
Julaị 6, 2007, elekere 2:43 nke ehihie
Anọ m na-achọ ịrịọ gị ka ị nyochaa blọgụ m ruo oge ụfọdụ ugbu a, enweghị m ike ịgafe nke a! http://www.srcoley.com/2007/07/06/going-hoofs-up/
Julaị 6, 2007, elekere 4:04 nke ehihie
Blọọgụ kwesịrị ịdị na bekee? Daalụ
Julaị 6, 2007, elekere 6:20 nke ehihie
Ọ ga-amasị m ịnye ndụmọdụ ụfọdụ na blọgụ na-abụghị Bekee. Dị ka nnukwu ihe ịma aka. Agaghị m ekpe ikpe ọdịnaya, n'ezie, mana ọ ga-amasị m ilele nhazi, nhazi, SEO, wdg!
Jul 7, 2007 na 6: 26 AM
Dị njikere inye ndụmọdụ…
Jul 7, 2007 na 7: 11 AM
Ndewo ọzọ! Daalụ maka azịza!
Nke a bụ njikọ:
Julaị 7, 2007, elekere 3:26 nke ehihie
Doug - ma ị ga-aga na-elele Hamelife ma ọ bụ na ị gaghị - daalụ maka nnukwu onyinye a.
Ejikọtala m gị na post m na nso nso a: Oh, nkem! Ụmụ agbọghọ Bennet nọ na njikọ izu ụka.
A ga-eji ekele nata ndụmọdụ ọ bụla.
Julaị 7, 2007, elekere 5:22 nke ehihie
Etinyere m njikọ na saịtị gị na blọọgụ m, nke dị n'akụkụ aka nri ala nke ebe nrụọrụ weebụ m.
Jul 8, 2007 na 4: 25 AM
Hmm, dabere na ntughari, enwere m olile anya na i nwere otutu Doug clones dina gburugburu 🙂
Jul 8, 2007 na 11: 09 AM
Ọ bara uru ọrụ ahụ! Ihe na-atọ ọchị bụ na mgbe m malitere, M n'ezie chọrọ ime otu n'ọnụ kwa blọọgụ – ma enweghị m ike inyere onwe m ozugbo m malitere!
Julaị 8, 2007, elekere 9:53 nke ehihie
A ga-ebipụta akụkọ ahụ na Fraịde… daalụ!
Jul 9, 2007 na 8: 39 AM
Ọ ga-amasị m iburu gị na onyinye gị. Nzi ozi a tụrụ aka na blọọgụ gị bụ:
Na blọọgụ m ga-achọ ka ị nye aka dị na URL. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, dị nnọọ email m, na-ekelekwa gị.
Jul 9, 2007 na 9: 51 AM
Kedu nnukwu onyinye Douglas. Daalụ maka ịkekọrịta amamihe gị. Nke a bụ blọọgụ m biputere ndụmọdụ. Achọtara m gị n'agbanyeghị ndebanye aha m na blọgụ Dawud Miracle. Udo.
Jul 9, 2007 na 10: 33 AM
Nke a masịrị m, Doug! Mmeri - ọ dabara na mmụọ nke ịde blọgụ nke ọma. 🙂
Julaị 9, 2007, elekere 9:26 nke ehihie
Jul 11, 2007 na 8: 31 AM
Nke a bụ nkwalite dị ịtụnanya. M na-agbalị ịchọpụta otú m nwere ike isi mee ihe yiri nke ahụ maka ndị na-agụ m!
Nke a bụ ọkwa m.
Blọọgụ ahịa azụmaahịa nke akwa ahịa
Julaị 12, 2007, elekere 12:02 nke ehihie
Nnukwu echiche ahịa Doug. Ọ bụrụ na ị nwere nkeji ole na ole iji nyochaa saịtị m mgbe ahụ amamihe gị ga-enwe ekele dị ukwuu.
Jul 13, 2007 na 2: 07 AM
Doug enwetara gị ndụmọdụ http://netglobalbooks.com/blog/
Ndụmọdụ ma ọ bụ aro ọ bụla nwere ekele dị ukwuu.
M ga-alaghachi maka ezigbo ndụmọdụ na mmụta site na blọọgụ gị.
Jul 13, 2007 na 7: 32 AM
Nwa nwoke dị mma, kedu echiche!
Jul 13, 2007 na 8: 06 AM
Doug - Enweghị m ike iguzogide onwe m n'ịmụ ihe n'aka nna ya ukwu n'onwe ya
Nke a bụ ọkwa m
Ọ ga-amasị m ka echiche gị maka otu esi akwụ ụgwọ blọgụ m nke ukwuu
Julaị 13, 2007, elekere 2:50 nke ehihie
Nweta echiche ịlele gị wee nweta "BLOG Tipped" site na otu blọọgụ ọkacha mmasị m, "Atụmatụ Weebụ site n'aka Jeremaya."
Ya mere, Biko, Biko Biko nyere aka na blọgụ m! Ọtụtụ ọganihu Daalụ!
Julaị 15, 2007, elekere 5:15 nke ehihie
OK, ebe a bụ arịrịọ ọzọ.
Julaị 16, 2007, elekere 8:47 nke ehihie
Nke a bụ saịtị blọgụ m, biko nye ya aka.
Jul 17, 2007 na 2: 47 AM
Onyinye mara mma. Enwere m ike iji enyemaka ụfọdụ!
Julaị 18, 2007, elekere 10:07 nke ehihie
Doug hi, emela m post na-ekwupụta ezi uche gị iji nyere anyị aka
Nke a bụ njikọ, thanx 🙂
Julaị 19, 2007, elekere 4:36 nke ehihie
Ọ ga-amasị m iji amamihe gị kwa…
Jul 20, 2007 na 7: 50 AM
Ọ bụrụ na ị ka nwere ike “tipping” fọdụrụ, ọ ga-amasị m ma ị nwere ike lelee PPC Hero.
Ntụnye blọgụ: Nnukwu ihe na-esote
Julaị 21, 2007, elekere 9:43 nke ehihie
Edebere akwụkwọ ozi maka ụtụtụ Mọnde:
Ana m achọ ihe ọ bụla ị ga-atụba m - template, layout, SEO - ihe ọ bụla na ihe niile. M na-achọ ime ụfọdụ overhauling na mkpa mara ihe na-arụ ọrụ na ihe na-adịghị arụ ọrụ.
Echiche kacha mma!
Jul 23, 2007 na 7: 59 AM
Ọ dị ka ihe nrịbama a ga-eme ka ị nwee ọrụ n'aka. Nke a bụ ozi m nwere njikọ gị:
B2B IT na Social Media 2: Echiche nke ndị na-ere ahịa
Daalụ, na chioma!
Julaị 31, 2007, elekere 1:16 nke ehihie
Enweghị m ike ịfefe ezigbo onyinye a.
Ọgọstụ 1, 2007 na 3:02 ehihie
Doug – ebe a bụ njikọ na blọọgụ m na obodo ndị otu na-achị maka ndị na-enyocha azụmaahịa na ndị ọkachamara na-eji ihe eji eme ihe.. Enwere m mmasị n'otú m ga-esi bulie otu n'ime obodo ma mee ka ndị mmadụ laghachi azụ. BTW, M "na-akwụ ụgwọ mbụ" njem nleta gị ọzọ iji zụọ ihe riri ahụ caffeine na Starbucks!
Ana m agbakwunye blọọgụ gị na ọnụ ụlọ nri anyị dị na http://www.mycatalyze.org/Blogs/CatalyzeBlogsFeedRoom/tabid/1301/Default.aspx.
Daalụ maka ndụmọdụ m nwetagoro na ajụjụ ọnụ gị na Paul Dunay.
Ọkt 1, 2007 na 4:40 PM
Doug - naanị na-eche mgbe ị ga-abịarute na ntinye blọgụ m? Agbakwunyere m blọgụ m na ndepụta echere gị na 8/1 ma ugbu a ọ bụ 10/1 - gbakwunyere na azụrụla m gị Starbucks.
Blog - aha = "Amamihe dị ugbu a"
Weebụ - http://www.mycatalyze.org
Ndewo Doug; ejighị n'aka na m mere nke a nke ọma. Nke a bụ blọgụ m n'ọnwa a. Emechaala m blọgụ m dị mkpirikpi site na mgbe m malitere ha; na ha aghọwo ndị ọzọ banyere blog ọzọ na-enye ha ndụmọdụ n'ezie. Ọ ga-amasị m ndụmọdụ ọ bụla ị nwere ike inye m.
Danke für anwụ Infos!
Feb 5, 2008 n’elekere 5:32 nke abali
Enwere usoro nke posts gbasara metric marketing social. Eji m ọkwa gị ebe a dị ka ezigbo ihe atụ maka ịkwalite ogo ikike Technorati nke mmadụ. Eji m n'aka na ị nwetara ịmụmụ ọnụ ọchị na ya, lee ebe a:
Mgbe ụfọdụ, ọ bụ nje n'ezie ma eleghị anya ọ bụghị collage - naanị azụmahịa 😉